Mumiriri weEU muZimbabwe Anoti Zvirango Zvichatarisiswa
Gumiguru 28, 2010
Mumiriri weEuropean Union muZimbabwe, VaAldo Dell’ Ariccia, vanoti zvirango zvakatemerwa mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamwe nevamwe vavo, hachisi chombo chikuru chekuunza shanduko asi kuti chete imwe yenzira yekuti munyika muve negutsaruzhinji, uye kuti kodzero dzevanhu dziremekedzwe.
VaDell’ Ariccia vanoti sangano ravo riri kuona shanduko muZimbabwe kunyange hazvo pakaitika mhirizhonga munguva yekunzwa pfungwa dzevanhu pabumbiro idzva remitemo, izvo zvichatariswawo kana vokurukura nyaya yezvirango iyi.
Mumiriri we EU uyu akasanganawo nevatori venhau manheru eChipiri muHarare, apo vaibvunza mibvunzo ine chekuita nezvirango izvi. Vakaudzawo musangano uyu kuti kuchemerwa kuri kuitwa nemamwe mapoka kuti zvirango izvi zvibviswe, chiratidzo chekuti zvirango izvi zviri kusevenza.
Sangano iri pamwe nenyika dzakaita seAmerica, Switzerland, Australia neNew Zealand, rakatemera zvirango zvekufamba pamwe nezvehupfumi kuna VaMugabe nevamwe vavo muZanu PF.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paUniversity of Zimbabwe, Professor John Makumbe, vanoti zvirango izvi zviri kuita basa razvakaisirwa, sezvo paine kuchema kukuru kuti dai zvabviswa.